တိုကျိုရဲ့ အကြီးဆုံးစွမ်းအားတန်ခိုးဖြစ်တဲ့ Meiji Jingu ဘုရားကျောင်းသို့ အလည်တစ်ခေါက် - JAPO Japanese News
ဂါ 01 Dec 2020, 12:45 ညနေ
စာဖတ်သူတို့သိထားကြတဲ့အတိုင်း 原宿Harajuku ဆိုတာ လူငယ်တွေရဲ့မြို့အဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ်.
Shinjuku နှင့် Shibuya တို့ဟာလည်း ၎င်းရဲ့အနီးအနားမှာပဲရှိပြီး, မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့တိုကျိုရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာတည်ရှိတဲ့ ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ Harajuku ဘူတာကနေ ကပ်ရပ်နားလေးမှာ အကျယ် 700,000㎡ လောက်ကြီးမားတဲ့ တောအုပ်ရှိပြီး၊ ထိုအထဲမှာနတ်ကွန်းရှိနေပါတယ်။
ဒီနေရာကတော့ တိုကျိုရဲ့အကြီးဆုံးစွမ်းအားရှိနေတဲ့ 明治神宮 Meiji Jingu ဘုရားကျောင်း တည်ရှိရာနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားသော Torii မှာ လင်းလတ်တောက်ပနေတဲ့ ရွှေရောင် Monshō မှာ ဧကရာဇ်မိသားစုရဲ့အမှတ်အသားကိုတွေ့ရတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဧကရာဇ်မိသားစုအတွက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို သမိုင်းကျောင်းတွေလည်းရှိမှာပဲလို့ထင်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်က ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၁၁ လပိုင်းမှာပဲ ဒီဘုရားကျောင်းကြီး နှစ် ၁၀၀ ပြည့်သွားခဲ့တာတဲ့…။
ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ နှစ် ၁၀၀၀ ကျော်တိုင်ရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေမှအများကြီးပါ။ ဧကရာဇ်မိသားစုသမိုင်းလည်း နှစ် ၂၀၀၀ လောက်အနည်းဆုံး ကျော်လာပါပြီ။ ဒါဆိုဘာကြောင့် နှစ် ၁၀၀ မတိုင်ခင်ကမှ တိုကျိုရဲ့အလယ်တည့်တည့်မှာ ဆောက်လုပ်ထားရသလဲ?
တည်ထားရတဲ့အကြောင်းအရင်ကတော့ ၁၉၁၂ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားတဲ့ Meiji ဧကရာဇ်ကို ရည်စူးထားခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အနိစ္စရောက်ပြီး ၂ နှစ်အကြာမှာ ဧကရာဇ်မိဖုရားလည်း အနိစ္စရောက်သွားကာ နှစ်ယောက်လုံးကိုအတူတူ ကျိုတိုမှာမြှုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။
ဧကရာဇ်အသစ်နန်းတက်လာခဲ့ပေမဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ယုံကြည်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ Meiji ဧကရာဇ်အတွက် ပြည်သူပြည်သားများက “ နှစ်ဦးလုံးရဲ့ဝိညာဥ်ကိုတည်ထားကိုးကွယ်မယ့်နတ်ကွန်း တိုကျိုမှာလိုအပ်တယ် !” လို့ပြောလာကြပါတယ်။
နောက်ပြီးယခင် ဧကရာဇ်တို့နှစ်ဦးစလုံးသက်ရှိထင်ရှားရှိစဥ်က နေထိုင်ခဲ့တဲ့ Yoyogi မှာ Meiji Jingu ကိုဆောက်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ၁၉၁၅ ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ တစ်နိုင်ငံလုံးကနေ လူပေါင်း ၁ သိန်း ၁ သောင်းကျော်တဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ဟာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး, စတင်ဆောက်လုပ်ချိန်ကနေ ၅ နှစ်အကြာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ် ၁၁ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့မှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်ပိုင်း၊ ဂျပန်ဟာအမေရိကန်ရဲ့ လေကြောင်းစီးနင်းမှုခံရပြီး၊ ဒီနတ်ကွန်းအပါအဝင် များစွာသောအဆောက်အဦးတွေဟာ ပြိုပျက်သွားကုန်ပါတယ်။ စစ်ပြီးနောက် “ Meiji Jingu ဘုရားကျောင်းကို ပြန်လည်မတည်ဆောက်ဘဲ ဂျပန်ကိုပြန်တည်ဆောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကြောင့်၊ ဂျပန်ပြည်တွင်းမှာသာမက နိုင်ငံရပ်ခြားကနေပါ အလှူငွေများစွာရောက်လာပြီး ၁၉၅၈ ခုနှစ် ၁၁ လပိုင်းမှာ အောင်မြင်စွာနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျယ်ဝန်းသော ပရဝုဏ်အတွင်းမှာ တိုကျိုရဲ့ ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ အသွားအလာပိတ်ဆို့မှုတွေလည်း လုံးဝမရှိဘဲ၊ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ တေးသီသံကိုပဲကြားရပါတယ်။
ဒီထဲမှာရှိတဲ့ စွမ်းအားတန်ခိုးတွေကို မိတ်ဆက်‌ပေးပါမယ်။
清正井 Kiyomasa no Ido
Sengoku စစ်ခေါင်းဆောင် Kiyomasa Kato တူးထားသောရေတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရေတွင်းမှာ မိနစ်တိုင်းရေလီတာ ၆၀ ခန့်တက်လာပြီး, မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုသန့်ရှင်းစေပြီးကံကောင်းခြင်းတွေ ခေါ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းရဲ့ wallpaper အဖြစ်လည်းအသုံးပြုတာတွေ့ဖူးတယ်နော်…
夫婦楠 (စုံတွဲ Kusunoki )
အဓိကနတ်ကွန်းရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ 楠木 Kusunoki တစ်စုံ..
ဂျပန်ကို shimenawa ဆိုတဲ့ကြိုးနဲ့ တစ်ခုတည်းအဖြစ်ချည်ထားပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနီးကပ်စေတယ်။
ဂျပန်ရဲ့သစ်ပင်တွေကြားကနေ နတ်ကွန်းဆောင်ကိုကြည့်ပြီးဆုတောင်းမယ်ဆို ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်စုံမယ်လို့ ခံယူကြပါတယ်။
ဒါကိုလည်း wallpaper အဖြစ်အသုံးပြုပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြန်လည်ယူဆောင်ကြပါတယ်.
ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့နေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်နေလို့ မင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲနဲ့ကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။
ကံကောင်းမယ်ဆို ဒီလိုမင်္ဂလာပွဲတွေကို စနေ၊တနင်္ဂနွေ တွေမှာတွေ့နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တိုကျိုကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် စွမ်းအားပြင်းတဲ့ ဒီ Meiji Jingu ဘုရားကျောင်းကို သေချာပေါက်လာရောက်လည်ပတ်လှည့်ပါအုံးနော် …..
တွန်ဂါမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဟာ ကီလိုမီတာ ၈၀၀၀ အဝေးမှာရှိသော်လည်း ဂျပန်တွင်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိခဲ့သည်။